Unyaka Round IKhabhinethi eCoy
Gqoka ecaleni kwesitovu sepellet yangaphakathi okanye indawo yokucima umlilo yangaphandle ngelixa imozulu isiya iphola kuba le ndlela yokuphumla yamaxesha ama-4 yindawo egqibeleleyo yokurhoxa ngelixa uthatha konke okufumaneka eWinnipeg Beach. Kuphela ibhloko esuka echibini eyenza ibe yinkampu efanelekileyo yokuloba umkhenkce. Indawo enkulu yokupaka ilori kunye nenqwelo erhuqwayo yekhephu. Umkhondo olungiselelwe ukutyibiliza welizwe ude udlule phambi kwekhabhathi! Kwaye njengesiqhelo uya kuyithanda iyadi ebiyelweyo yenjana yakho!
Ikhabhinethi yethu ye-1200 sq foot inamagumbi okulala ama-2 lilinye lineebhedi zendlovukazi kwaye inegumbi lebhanti elinocango oluphuma kwelinye lamagumbi okulala (enye phezu kwebhedi enye). Ikhitshi lethu elipholileyo linayo yonke into oza kuyidinga ngokuhlala kwakho, yiza nokutya nje! Kukwakho nebhafu enye epheleleyo kunye negumbi lokuhlamba impahla! Sinobubele kwisilwanyana sasekhaya (ngaphandle kweekati) kwaye sinebhedi ye pooch!
I-Creekside: indawo yethu entle isinika iinketho ezi-2 zokuthatha ithuba lomlambo 1)indlela yokuhamba esecaleni kwekhabhinethi ikhokelela kwibhulorho ephezu kwemijelo yamanzi amancinci, 2) thatha ikofu kwaye uhambe uhle ngendlela engasemva ubaleka ecaleni kwendlela. umlambo
Indawo yosapho lonke: amagumbi amabini okulala ngalinye linokumkanikazi. Igumbi lokuhlala liphumile kwi-master kwaye linamawele ngaphezulu kwebhedi. Fihla-ibhedi kwigumbi lokuhlala. Kukho nebhedi yenjana!
Indawo yangaphandle: I-BBQ kunye nendawo yokucima umlilo, ebiyelwe kwiyadi engasemva, eyadi enkulu engaphambili enegadi yemifuno-zincede ekufumaneni amaqunube amatsha kunye nemifuno. (igaraji asiyondawo yokupaka izithuthi kodwa ungagcina iibhayisekile okanye amaphenyane, njl.njl)
Ukuba ufuna uncedo sizakube sikhona kodwa asihlali edolophini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Winnipeg Beach